Mauricio Pochettino kadib guuldaradii Manchester United: “Aad ayaan u faraxsanahay” – Gool FM
Mauricio Pochettino kadib guuldaradii Manchester United: “Aad ayaan u faraxsanahay”
(Premier league) 14 Jan 2019. Tottenham Hotspur ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Manchester United kulan adag ay ku wada ciyaareen horyaalka Premier League, hadana sidaasoo ay tahay macalinka reer Argantina Mauricio Pochettino ayaa wuxuu farxad ka muujiyay natiijada ay ciyaarta ku soo idlaatay.
Spurs-ka ayaanan soo bandhigin qaab ciyaareed fiican qeybta hore ee ciyaarta, balse qeybta labaad ayay sameeyeen qaab ciyaareed cajiib ah, hadii uusan David de Gea sameyn lahayn bandhig fiican waxay heli lahaayeen barbaro ama way guuleysan lahaayeen.
Hadaba ciyaarta kadib ayuu tababare Mauricio Pochettino la hadlay saxaafada wuxuuna yiri:
“Waxaan sameenay wax walba si aan kulankan kaga badino kooxda Manchester United, waxaan helnay fursado badan, gaar ahaan qeybtii labaad ee ciyaarta”.
Intaas kadib Pochettino ayaa wuxuu ka hadlay dhaawaca soo gaaray Harry Kane dhamaadka ciyaarta
“Wuxuu ahaa kulan aad u xun ka hor dhamaadka ciyaarta, uma maleynayo inay aheyd mid caqli-gal ah, balse waxay ahayd arin xun”.
“Aad ayaan ugu faanayaa kooxdeyda, waan ku faraxsanahay qaab ciyaareedkii aan sameenay, kadib mudo dhan 4 sano iyo bar waxaan arkay qaab ciyaareedka ugu fiican ee kooxda qeybtii labaad ee kulankii Manchester United”.